Dhismaha shirkadda iyo taageerada ganacsiga ee Latvia
Dhismaha shirkadda Latvia
Diiwaangelinta shirkadda ee Latvia
Samaynta shirkadda Latvia waa geedi socod sahlan oo toosan. Xaqiiqdii, Latvia waxay ku jirtaa kaalinta 19aad qiimeynta Bangiga Adduunka sanadlaha ah ee "Doing Business" . Noocyada ugu caansan ee hey'adaha sharciga ee Latvia waa Shirkad Cayiman oo Xaddidan ( SIA ) iyo Shirkadda Wadaagga ah ( AS ). Ganacsigaaga sidoo kale waxaa loo diiwaangelin karaa inuu yahay shaqsi shaqsi ah (xadidan ama iskaashi guud ah) ama ganacsade kaligiis ah. Shirkad ku taal Latvia waxaa iska diiwaangelin kara dadka deegaanka iyo shisheeyaha dabiiciga ah iyo kuwa sharciga ah iyo waliba bulshada shaqsiyadeed.
Xaddidan * € 200
Waxaa lagu taliyay € 650
Dhamaan iskudarka € 1950
Tilmaanta saxiixa dijitaalka ah
Kulan nootaayo ah 
Dukumiinti qoraal ah 
Khidmadaha gobolka ayaa lagu daray
Cinwaanka sharciga ah 
Digniin! Waxaan leenahay xuquuq gaar ah oo aan ku badalno dhammaan qiimayaasha la muujiyay baahiyaha laga qabo adeegyada la bixiyo. Adigoo dalbanaya annaga waxaad ku raacsan tahay inaad ka "bilowdo" mabda'a xigashada.
* Diiwaangelinta shirkadda Latvian "khadka tooska ah ee" e-saxiixa ".
 Soo gudbinta dukumiintiga elektaroonigga ah micnaheedu waa caawimaad xagga saxeexa dukumintiga dijitaalka ah iyo soo gudbinta khadka tooska ah.
   Caawinaad iyo taageero keliya.
 Qaab ballantu leh nootaayo.
 Adoo matalaya / gudbinaya dukumintiga adiga oo ku jira Diiwaanka Shirkadaha ee Jamhuuriyadda Latvia.
 Cinwaanka sharciga ah waxaa ku jira ilaa hal sano.
 EDS waa nidaam caddeyn canshuureed elektiroonig ah.
Faa'iidooyinka ganacsiga laga sameeyo Latvia
Mid ka mid ah isku xirka internetka ugu dhakhsaha badan adduunka;
Gawaarida gaadiidka iyo isgoysyada tareenka;
Waaxyada farsamada iyo IT-ga oo la sameeyay ;
Shaqaale xirfad sare iyo shaqaale luqado badan ku hadla;
Xubin kamid ah caadooyinka EU-da iyo Eurozone;
Xayiraad looma hayo ganacsatada shisheeye;
Heerka 0% CIT ee macaashka dib loo soo saaray;
Meel aad ufiican oo laga sameeyo ganacsiga labada - Bariga iyo Galbeedka;
Barnaamij degenaansho oo ballaaran;
Nidaamka samaynta shirkadda toosan;
Ma jiro lacag shisheeye ama xayiraad ganacsi;
Looma baahna imaanshaha imaatinka shirkadda haddii PoA la isticmaalo;
Kaabayaal aad u horumarsan;
Jawi dhaqaale iyo siyaasadeed oo deggan.
Habka dhismaha ee shirkadu way kala duwan tahay iyadoo ku xidhan nooca shirkad ganacsi ee aad jeclaan lahayd inaad iska diiwaangeliso. Sidoo kale, mas'uuliyadda saamileyda, raasamaalka ugu yar ee bilowga ah, iyo sidoo kale waqtiga, kharashyada iyo dukumiintiyada loo baahan yahay waxay kuxiran yihiin nooca sharci ee ganacsiga ee la soo xulay. Caadi ahaan, hawsha sameynta shirkadda waxaa loo qeybin karaa toddobo tallaabo:
La tashiga macluumaadka ku saabsan shirkadda  ;
Dukumiinti qabyo qoraal ah sameynta shirkadda  ;
Furitaanka akoontada bangiga ee ku-meelgaarka ah (haddii loo baahdo);
Ku wareejinta raasumaalka bilowga ah akoonkii bangiga ee ku meel gaarka ah;
Bixinta khidmadda gobolka  ;
Dukumiintiyada samaynta shirkaddu waxay u gudbineysaa Diiwaanka Shirkadaha;
Aruurinta go'aanka la xiriira sameynta shirkadda.
 Go'aanka magaca shirkadda, cinwaanka sharciga ee shirkadda, xaddiga raasumaalka saami qaybsiga iyo saami qaybsiga (haddii laba ama in ka badan saamilayda), iyo su'aalo kale.
 Dukumiintiyada samaynta shirkaddu way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran nooca foomka ganacsiga ee loo doortay. Dukumiintiyada qaarkood waa in la saxiixaa marka la dhaariyo nootaayada dhaarta.
 Bixinta khidmadda diiwaangelinta, bixinta daabacaadda iyo lacagaha kale ee suurtagalka ah.
Haddii ay dhacdo in shirkaddu ay noqoto canshuur-bixiye qiime-badan, waxaa suurogal ah in la dalbado in lagu daro diiwaangelinta VAT- ka isla isla waqtigaas markii la geynayo dukumiintiyada diiwaan-gelinta Diiwaangelinta Shirkadaha.
Codsiga Diiwaangelinta (Foomka KR4) - waa in la cadeeyaa;
Xusuus-qorka urur ama go’aan ku-biirid haddii hal aasaasi;
Bayaanka bangiga ee xaqiijinaya bixinta bilowga hantida;
Qiimaynta hantida (haddii loo baahdo);
Diiwaanka saamileyaasha - in la sharciyeeyo;
Oggolaanshaha dhammaan xubnaha guddiga inay qabtaan jagada - nootaayo ka ha noqdee;
Ogeysiiska cinwaanka sharciga ah;
Oggolaanshaha milkiilaha guriga haddii ay dhacdo in gurigu aanu ka mid ahayn aasaasayaasha shirkadda;
Dukumenti cadeynaya waajibaadka gobolka iyo lacag bixinta daabacaada.
SIA (cadaalad dhimis)
Qofka Sharciga ah
1 (qof dabiici ah)
Soo hel Shirkad Diyaar-garow ah
Soo iibsiga shirkad diyaarsanaanta ayaa door muhiim ah u leh samaynta shirkad cusub. Caadi ahaan, ganacsadayaashu waxay doortaan inay iibsadaan shirkad diyaarsan haddii ay u baahan yihiin shirkad horay u shaqeyneysa saacado gudahood. Sababta kale ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan u tahay shirkadda in la diiwaangaliyo waqti ka hor. Shuruuda noocan oo kale ah waxaa badanaa lagu soo daraa hindisooyinka dowladda. Sidoo kale, la-hawlgalayaasheeda iyo hay'adaha maaliyadeed ayaa u tixgelin kara shirkad duug ah inay yihiin kuwo la aaminay
Haddii ay dhacdo inaad go'aansato inaad soo iibsato shirkad diyaarsan intii aad dhisi lahayd shirkad cusub, waxaa jira waxyaabo badan oo maskaxda lagu hayo:
Waxaad bilaabi kartaa howlahaaga ganacsi isla marka isla marka iibsigu dhamaado. Fadlan tixgeli, in isbeddel kasta, sida magaca shirkadda, ay qaadan doonto waqti dheeri ah iyo kharashyo. Bixiyeyaasha adeegga qaarkood waxay bixiyaan inay iibsadaan shirkad diyaarsanaanta qayb gaar ah. Waa muhiim inaad raadiso shirkad diyaarsan, oo ka diiwaangashan inay ka shaqeyso goob kugu habboon.
Dhammaan shirkadaha diyaarsanaanta waxay leeyihiin taariikh. Waa inaad sameysaa dadaalkaaga saxda ah si aad u hubiso in taariikhda shirkadda aad rabto inaad iibsato ay 100% nadiif tahay. Taas macnaheedu waa in shirkaddu ay lahayd waxqabadka eber oo aan lahayn wax deymo ah. Caadi ahaan, shirkadaha adeegga bixiya waxay sidoo kale keenaan caddeyn xaqiijinaysa waxqabadka eber ee shirkadda aad diyaar u tahay inaad iibsato.
Qiimaha shirkadaha diyaarka u ah iyo howlaha lagu soo daray ayaa ku kala duwan bixiyeyaasha adeegga kala duwan. Caadi ahaan, sidoo kale dabeecadda qofka (gaar ahaaneed ama sharci ah) iyo heerka qofka (deggane ama aan deganeyn) waxay saameyn ku yeelan doontaa kharashyada helitaanka shirkad diyaarsan. Qiimaha celceliska qiimaha shirkad diyaarsanaanta ee Latvia waxay ku kala duwan tahay 1 000 EUR iyo 1 600 EUR oo iskeed isugu jirta:
Wadatashi ku saabsan shirkadaha diyaarsanaanta ka sameysan Latvia;
Diyaarinta heshiiska iibka ee caadiga ah;
Qiimaha nootaayaha iyo gobolka;
Cinwaanka sharciga ah;
Xaqiijinta in shirkaddu leedahay taariikh nadiif ah.
Canshuuraha & Xisaabaadka
Iyada oo aan loo eegin inaad heshay shirkad diyaarsaneyd ama aad soo martay nidaamka shirkad sameynta, dhammaan hay'adaha sharciga waxay u baahan yihiin inay raacaan xeerar cayiman oo ku saabsan cashuuraha iyo keydinta. Sida ku cad Sharciga Canshuuraha iyo Waajibaadka, canshuuraha iyo waajibaadka waxaa soo rogay dowlad-goboleed ama degmo. Waxa kale oo jira dhowr xaalado ah oo laga reebayo marka la eego siyaasadaha taageerada ganacsi ee ay soo bandhigtay dawladdu. Shirkadaha leh heerka Aaga Dhaqaalaha Gaarka ah ( SEZ ), waxay si aad ah ugu raaxeystaan heerarka canshuurta ee aad u yar marka loo eego faa'iidooyinka kale. Tusaale ahaan, canshuurta dakhliga shirkadaha waxaa hoos loogu dhigaa 3% macaashka guud ee shirkadaha leh heerka SEZ. Intaa waxaa sii dheer, waxaa la soo saaray sharci gaar ah shirkadaha bilowga 1 Janaayo 2017. Sharciga cusub ayaa go’aaminaya barnaamijyada kaalmada ee dowladda:
Kordhinta cashuurta bulshada iyadoo ay raali ka yihiin shaqaalaha;
Barnaamijka taageerada oo ujeeddadiisu tahay soo jiidashada shaqaalaha aqoonta sare leh;
Cashuur celinta dakhliga shirkadaha iyo cashuur celinta CIT.
Hay'adaha sharciga, ee ku soo noqonaya muddo 12 bilood ah oo ka badan 50 000 EUR, waa inay isu diiwaangeliyaan canshuur-bixiye qiime ku jira. Si kastaba ha noqotee, waa suurtogal in la diiwaangaliyo sidii bixiyaha VAT sidoo kale kahor inta aan xadkaan la gaarin. Heerka VAT caadiga ah ee Latvia waa 21% waana la bixin karaa saddex-biloodle ama bil kasta, iyadoo kuxiran shuruudaha gaarka ah ee cashuur bixiyaha.
Laga soo bilaabo 2018, boqolkiiba 20% canshuurta dakhliga shirkadaha waxaa lagu dabaqaa oo keliya macaashka loo qaybiyo iyadoo loo marayo qeybinta ama loo isticmaalo ujeeddooyin aan toos ula xiriirin horumarinta ganacsiga. Canshuuro kale looma adeegsan karo dakhliga soo gala ganacsiyada. Shirkadaha deganayaashu waxay CIT ka bixiyaan dakhligooda adduunka oo dhan. Shirkadaha aan-deganeyn ee leh aasaas rasmi ah ( PE ) waxaa lagu soo dallacayaa heerka caadiga ah ee CIT marka loo eego dakhligooda ka-koobnaanta Latvian-ka. Maqnaanshaha PE, shirkadaha shisheeye waxaa laga yaabaa inay ku qasbanaadaan 0 illaa 15% inay ka celiyaan canshuurta bixinta lacagaha u qalmidda, sida bixinta meelaha canshuurta iyo khidmadaha maareynta.
Shirkadaha sidoo kale waxaa loo diiwaan gelin karaa inay yihiin shirkado waa-weyn. Iyada oo ka soo horjeedo noocyada kale ee sharci ee ganacsiga, shirkada yar-yar waa nidaam cashuureed halkii laga isticmaali lahaa nooc ganacsi oo gaar ah. Shirkadaha micro Micro waxay bixiyaan canshuurta 15% canshuurta shirkadda. Shirkadaha micro Micro waxay la kulmaan xayiraadyo badan, sida isugeynta sanadlaha ah ee shirkadu kama badnaan karto 40 000 EUR mushaarka kama badnaan karo 720 EUR bishii.
Dadka daggan Latvian-ka waxaa laga qaadaa canshuur dakhli shaqsiyadeed dakhligooda adduunka oo dhan. Dadka aan daganeyn waxaa laga qaadaa canshuur dakhli shaqsiyadeed dakhliga soo gala maxaliga. Sannadkii 2018, ayaa la soo saaray nidaam cashuureed shaqsiyeed horumar leh oo la soo saaray. Taas macnaheedu waa in canshuurta dakhliga shaqsiga ah lagu dallaco heerar canshuureed oo kaladuwan iyadoo lagu saleynayo xaddiga dakhliga la canshuurayo. Heerarka canshuurta dakhliga ee shaqsiga ah waa sida soo socota:
Caddadka canshuurta dakhliga ee shakhsiga ah 20% waxaa lagu soo rogay qaddarka dakhliga la canshuurayo oo aan ka badnayn 1 667 EUR bishii ama 20 004 EUR sanadkii;
Caddadka canshuurta dakhliga ee shakhsiga ah 23% waxaa lagu soo rogay qaddarka dakhliga la canshuurayo, kaasoo u dhexeeya 1 667 EUR iyo 5 233 EUR bishii ama inta udhaxeysa 20 004 EUR iyo 62 800 EUR sanadkii;
Caddadka canshuurta dakhliga ee shakhsiga ah oo ah 31,4% waxaa lagu soo rogay qaddarka dakhliga la canshuuri karo, kaasoo ka sarreeya 5 233 EUR bishii ama 62 800 EUR sanadkii.
Canshuuraha kale ee ay bixiyaan shirkadaha Latvia waxaa ka mid ah canshuurta amniga bulshada iyo waajibka dowladda ee halista ganacsiga. Shirkadaha Latvian-ka waxaa ku waajib ah inay soo gudbiyaan warbixinta canshuurta kahor 15-ka bisha soo socota. Bayaanka maaliyadeed ee sanad maaliyadeedka waa in la soo diraa ugu dambeyn afar bilood kadib dhammaadka sanadka maaliyadeed.
Oggolaanshaha Deganaashaha iyada oo loo marayo ganacsiga Latvia
Faa'iido kale oo laga helo diiwaangelinta shirkaddaada Latvia waa suurtagalnimada in lagu helo rukhsad deganaansho gudaha Latvia. Markaad hesho ogolaanshiyaha joogitaanka Latvia, waxaad fursad u leedahay inaad si xor ah ugu safarto aagga Schengen ilaa 90 maalmood gudahood muddo lix bilood gudahood ah. Dadka haysta ogolaanshaha deganaanshaha Latvia, iyo sidoo kale xubnaha qoyskooda, waxay xaq u leeyihiin inay shaqeeyaan, wax bartaan oo adeegsadaan adeegyada caafimaadka ee Latvia. Faa'iidooyinka kale waxaa ka mid ah nidaamka fududeynta helitaanka fiisaha Mareykanka iyo waddamada kale.
Qaabka ogolaashaha degenaanshuhu wuxuu u sii jeedaa ikhtiyaaro kala duwan oo loogu heli karo ogolaanshaha daganaashaha iyada oo loo marayo ganacsiga Latvia:
Maalgashiga caasimada saamiga shirkada Latvian - muwaadin ajnabi ayaa dalban kara ogolaanshiyaha joogitaanka haddii uu ku deeqay caasimada saamiga shirkada Latvian. Hantida maal gashaday waa ineyna ka yarayn 50 000 EUR (hadii shirkada sanada sanadlaha ah aysan ka badneyn 10 000 000 euro oo aysan laheyn wax kabadan 50 shaqaale ah), ama 100 000 EUR (hadii shirkada sanada sanadlaha ah ay ka badato 10 000 000 euro) Waxay leedahay in kabadan 50 shaqaale oo ay weheliso kaabayaasheeda).
Noqoshada xubin guddiga, maamule, xubin gole, wakiilka shuraako, maamule, wakiil ama wakiil wakiil ganacsade ajnabi howlaha kala duwan ee la xiriira laanta shirkad shisheeye ama shirkad Latvia.
Noqoshada shaqaale shirkad Latvia ah oo leh mushaharka ugu yar 860 EUR bishii. Ogolaashaha joogitaankan waxaa la soo saaray 5 sano laakiin waxay u baahan tahay in la kordhiyo sanad kasta.
Haddii kale, waxaa suurogal ah in la dalbado fiisaha nooca C. Nooca fiisaha C waa fiiso-gaaban oo aagga Schengen ah. Waxay noqon kartaa galitaan badan, laba ama fiiso hal mar ah.
Noocyada fiisada C-nooca
Fiisaha nooca-C ee ansax ku ah dhammaan waddamada xubnaha ka ah Schengen - fiiso mideysan, oo xaq u siineysa kuwa haysta inay ku sii nagaadaan mid kasta oo ka mid ah waddamada xubnaha ka ah Schengen;
Fiisada nooca C-ga oo ansax ka ah Latvia oo keliya, ama ka saarida dal xubin cayiman oo Schengen ah.
Muwaadiniinta Midowga Yurub waxay sidoo kale xaq u leeyihiin inay helaan ogolaanshiyaha joogitaanka ee Latvia haddii qofku degganaa Latvia shan sano ama ka badan. Xaaladaha qaaska ah, sharciga shanta sano waa la iloobaa.
Waan aqbalay kaydinta xogta shaqsiyeed.
Foomka Xiriirka Degdega ah